Apple egwu Europe mgbe nkwado nke 13.000 nde euro nyere iwu site na EU | Akụkọ akụrụngwa
Nke a bụ otu n'ime ihe ndị ahụ na anyị anaghị achọ ịgụ nke ukwuu ebe ọ bụ na, n'agbanyeghị ihe niile, ọ na-ewute ndị ọrụ ọfụma. Apple nwetara ntaramahụhụ nke nde euro 13.000 maka izere ụtụ isi na Ireland na Europe ọ na-akwado mmegharị a. Ugbu a, CEO nke ụlọ ọrụ Cupertino na-aza akwụkwọ ozi kpọmkwem na European Union na Spanish zuru oke na ebe anyị nwere ike ịgụ ihe ndị dị ka:Kemgbe ọtụtụ afọ, anyị natara ndụmọdụ site n'aka ndị isi ụtụ isi nke Irish na otu esi agbaso iwu ụtụ isi nke Irish n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Na Ireland na mba niile ebe anyị na-arụ ọrụ, Apple na-agbaso iwu ma na-akwụ ụtụ isi niile akwụ ụgwọ ya »
Nke a bụ akwụkwọ ozi zuru oke nke na-akọwa ihe merenụ na ihe na-eyi egwu itinye obere ihe onwunwe na ndị ọrụ pere mpe maka Europe ma ọ bụrụ na nsogbu ahụ edozighị na ị ga-akwụ ụdị ego a:
Afọ 36 gara aga, ogologo oge tupu ahapụ iPhone, iPod, ma ọ bụ ọbụna Mac, Steve Jobs guzobere arụmọrụ mbụ nke Apple na Europe. Site na mgbe ụlọ ọrụ ahụ amatalarị na ijere ndị ahịa Europe ozi ọ chọrọ ntọala ebe ahụ. Ya mere, n'October 1980, Apple mepere ụlọ ọrụ na Cork (Ireland) na ndị ọrụ 60.
N'ime afọ ndị ahụ, Cork nwere oke enweghị ọrụ na ọnụ ọgụgụ dị ala nke itinye ego na akụ na ụba. Agbanyeghị, njikwa Apple hụrụ ebe bara ọgaranya na ikike, nwee ike tolite na ụlọ ọrụ ahụ ma ọ bụrụ na ọ nweta ihe ịga nke ọma ọ tụrụ anya ya.
Kemgbe ahụ Anyị gara n’ihu ịrụ ọrụ n’akwụsịghị akwụsị na Corkọbụnadị n'oge ejighị n'aka maka ụlọ ọrụ anyị, ma taa, anyị na-ewe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmadụ 6.000 gafee Ireland. Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu ka nọ na Cork, gụnyere ụfọdụ ndị ọrụ mbụ anyị, na-arụ ọrụ dịgasị iche iche dịka akụkụ nke ọrụ Apple zuru ụwa ọnụ. Ọtụtụ ụlọ ọrụ mba dị iche iche agbasowo ihe nlereanya anyị site na itinye ego na Cork, nke taa nwere akụ na ụba mpaghara na-abawanye karịa na mbụ.
Ọganiihu nke meworo ka itolite Apple na Cork na-abịa site na ngwaahịa ndị ọhụụ na-eme ka ndị ahịa anyị nwee obi ụtọ. Ihe ịga nke ọma a enyerela anyị aka ịmepụta na ịnọgide na-enwe ihe karịrị ọrụ XNUMX nde na Europe dum.- Ndị ọrụ Apple, ọtụtụ narị puku ndị mmepe ngwa na-eme ike ha niile na Storelọ Ahịa App, gbakwunye ọrụ ndị ọzọ n'etiti ndị nrụpụta na ndị na-ebubata anyị. Ọtụtụ azụmaahịa pere mpe na obere na-adabere Apple, anyị nwekwara obi ụtọ na ha nwere ike ịdabere na anyị.
Dị ka ụmụ amaala na ndị otu azụmahịa nwere ọrụ, anyị nwekwara obi ụtọ maka onyinye anyị na akụ na ụba mpaghara na Europe yana obodo gburugburu ụwa. Ọganihu anyị kemgbe ọtụtụ afọ emeela ka anyị bụrụ onye ụtụ isi kachasị ukwuu Ireland, onye ụtụ isi kacha ukwuu na United States na onye ụtụ isi kachasị ukwuu n'ụwa.
N'ime oge a niile, anyị natara ndụmọdụ site n'aka ndị isi ụtụ isi nke Ireland ka anyị rube isi n'iwu iwu ụtụ isi ha, otu ụdị ndụmọdụ ụlọ ọrụ ọ bụla nwere ọnụnọ na mba ahụ na-anata. Apple kwadoro iwu anyị na-akwụ ụtụ isi niile anyị ji, na Ireland na mba ọ bụla anyị na-arụ ọrụ.
European Commission amalitela mkpọsa iji degharịa akụkọ ihe mere eme nke Apple na Europe, leghaara iwu ụtụ isi nke Ireland anya na usoro a gbanwere usoro ụtụ isi mba ụwa. Echiche ahụ enyere na August 30 na-ebo ebubo na Ireland nyere Apple ụtụ isi pụrụ iche. Nkwupụta a dabere na ma ọ bụ eziokwu ma ọ bụ iwu. Anyị anaghị arịọ ma ọ bụ nata ụdị ọgwụgwọ ọ bụla. Anyị achọtala onwe anyị n'ọnọdụ a na-adịghị ahụkebe nke ịchọrọ ka anyị kwụghachi ụtụ isi na gọọmentị na-ekwu na anyị enweghị ụgwọ karịa ihe anyị kwụrụla.
Uche nke Commission bụ ihe a na-enwetụbeghị ụdị ya na ihe ọ pụtara dị oke njọ ma buru ibu. Ihe ọ na-atụ aro n'ezie bụ iji dochie ụdị ụtụ isi ndị Irish na ụdị ọzọ, nke kọmịshọn ahụ chere na ọ gaara adị. Nke a ga-abụ nbibi na-emebi mbibi nke ọbụbụeze nke ndị otu na-ahụ maka European Union n'ihe gbasara usoro akụ na ụba nke ha na ụkpụrụ nke eziokwu nke usoro iwu na Europe. Ireland ekwuola na ya bu n'obi ịrịọ arịrịọ megide mkpebi nke Commission ahụ na Apple ga-emekwa otu ihe ahụ. Anyị tụkwasịrị obi na iwu nke Commission ga-akwụsị.
N’etiti ya, ikpe a na-ahụ maka kọmịshọn abụghị maka ego ole Apple na-atụ ụtụ isi, mana ihe gọọmentị na-anakọta ego ahụ.
Ationtụ ụtụ nke ụlọ ọrụ mba dị iche iche bụ okwu dị mgbagwoju anya, mana enwere ụkpụrụ nabatara ebe niile: uru nke ụlọ ọrụ ga-atụ ụtụ na mba ebe ha mepụtara uru ha. Apple, Ireland na United States kwenyere n'okwu a.
N’ihe banyere Apple, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nyocha na mmepe anyị niile na-eme na California, yabụ, a na-atụ ụtụ ka ukwuu n’ime uru anyị na United States. Companieslọ ọrụ Europe ndị na-azụ ahịa na United States na-atụ ụtụ isi n'otu ụkpụrụ ahụ. Agbanyeghị, ugbu a, kọmịshọn a chọrọ ịgbanwe iwu a na-ewegharị oge.
Mkpebi doro anya lekwasịrị AppleMana mmetụta ya dị oke njọ ma na-emebi ga-emetụta na itinye ego na ọrụ ọrụ na Europe. Ọ bụrụ na a ga-etinye echiche nke Commission n'ọrụ, ụlọ ọrụ niile dị na Ireland na ndị ọzọ na Europe ga-etinye ihe egwu nke ịbụ ndị iwu na-adịbeghị mbụ na-atụ ụtụ.
Apple akwadoro mgbanwe mgbanwe ụtụ isi na ebumnuche abụọ: ịdị mfe na nghọta. Anyị kwenyere na mgbanwe ndị a kwesịrị ịpụta site na usoro iwu iwu kwesịrị ekwesị, na-eburu n’uche n’okwu ya dị ka olu ndị isi na ụmụ amaala nke mba ndị emetụtara. Dịkwa ka iwu ọ bụla ọzọ, iwu ọhụrụ kwesịrị ịdị site ugbu a gawa, ọ bụghị ịlaghachi azụ.
Anyị na-etinye aka na Ireland na ọ bụ ebumnuche anyị ịnọgide na-etinye ego ebe ahụ, na-eto ma na-ejere ndị ahịa anyị ozi otu mmụọ na nraranye ahụ dị ka mgbe ọ bụla. Anyị kwenyesiri ike na eziokwu na ụkpụrụ iwu nke ntọala European Union ga-emeri.
Ya mere mbipụta nke ntaramahụhụ na nzaghachi ngwa ngwa nke Cook, Ọ nwere ike ịga ogologo oge naanị mgbe obere ihe karịrị otu izu ịga n'ihu ngosi nke ọhụrụ iPhone 7.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » Apple egwu Europe mgbe EU nyere iwu nke 13.000 nde
Maazị Cook ka ndenye ọpụpụ. Ọ bụrụ na ọ bụghị na e nwere ụzọ. Si n'ahịa ndị Europe pụọ ugbu a.
Ndị a bụ lentil… .. ịkwụ ụgwọ ma ọ bụrụ na ọ bụghị wee gaa ree ya Iphone ea Obama.
Zaghachi Pablo Ríos Montes
M dọrọ aka ná ntị dijo
Ndị ọrụ SAMSUNG kwuru ………… ọ dị mfe ikwu maka ọrụ nke ọtụtụ puku ndị Europe, kedụ onye ị chọrọ, onye kpọgara ya China, Vietnam, Korea, Morocco? Mgbe ahụ, kwaa arịrị banyere enweghị ọrụ.
Zaghachi m dọrọ aka ná ntị
Nexus ọhụrụ nke Google nwere ike ịbụ $ 449 na $ 599